Waa maxay Korantada Hada, Sidee loo Cabiraa? | RayHaber | raillynews
HomeGUUDWaa maxay Korantada Hada, Sidee loo Cabiraa?
03 / 02 / 2020 GUUD, Warqad Hordhac ah
Waa maxay hadda korantadu?
Qulqulka korontada wuxuu aad ugu egyahay il biyo ah, halkii ay ka heli lahaayeen kaliya moleekule biyo ah oo webiga ku dhajinaya, walxaha ay ka kooban yihiin ayaa lagu dallacayaa dariiqa korantada. Korantada hadda jirta waxaa lagu qeexaa heerka ay khidmaddu ku kala bixi karto dusha sare. Korantada hadda jirta waa heerka qulqulka qulqulka oo ka gudbaya meel gaar ah wareegga korantada, waxaa lagu cabiray Coulomb / labaad, oo loo yaqaan Amper.
Korantada hada jirtawaxaa lagu qeexaa sida xaddiga culeyska culeyska saaran yahay dusha sare. Walxaha ay kulushahay had iyo jeer had iyo jeer waxay elektroonik yihiin. Atamyada kujira ashyaa'da elektarooniga ah waxay leeyihiin elektarooni badan oo bilaash ah oo uga safraya atom ilaa atom iyo meelkasta oo udhaxeysa. Dhaqdhaqaaqa elektaroonigani waa mid aan kala go 'lahayn, sidaa daraadeed ma jiraan wax qulqulaya jiho kasta. Si kastaba ha noqotee, markii aan ku adeegsanayno koronto tamarta hayaha, dhammaan elektarooyinka bilaashka ah waxay u dhaqaaqaan isla jihada, ayaga oo abuuraya hadda. Qeybta hadda jirta waa ampere. Tan iyo markii culeyska lagu cabiro coulombs iyo waqtiga ilbiriqsiyo, hal ampere waxay la mid tahay xayndaabkii ilbiriqsiyo.
Arrinta caadiga ahi waxay ka kooban tahay atomyo ka kooban Nuclei si fiican loo eedeeyay iyo elektarooni elektaroonig ah oo ku xeeran. Proton wuxuu leeyahay 1836 jeer tirada elektarooniga, laakiin wuxuu leeyahay isla cabir isku mid ah, ma ahan diidmo, waa mid togan. Cawaaqibka ugu weyn ee tani waa in proton iyo elektaroniga ay soo jiitaan midba midka kale si xoogan. Laba protons ama laba elektarooni ayaa midba midka kale si xoog leh u riixaya.
Sidee loo Cabirayaa Korantada Hada jirta?
Qalabka ugu caansan ee loo adeegsado cabbiridda hadda waa ammeter. Maaddaama cutubka SI ee cabbira hadda korantada uu yahay amperes, aaladda loo isticmaalo in lagu cabbiro hadda waxaa loo yaqaannaa ammeter. Waxaa jira laba nooc oo koronto-weyeyaal ah: toos ah oo hadda jira (DC) iyo talantaalliyo hadda jira (AC). In kasta oo loo diro DC hadda hal jiho, AC waxay bedeshaa jihada hadda jirta waqtiyada caadiga ah. Aamitirku wuxuu isku dayaa inuu cabbiro tamarta korantada isagoo cabbiraya kan hadda jira isagoo adeegsanaya isugeyn taxane ah oo leh iska caabin aad u hooseysa iyo falcelin la taaban karo. Ku socota alaabadaas https://www.elektimo.com/kategori/multimetreler Waad gaari kartaa oo ka iibsan kartaa bogga.
Dhaqdhaqaaqa dhaqaajinta ammeters-ka wareega waxaa sababay birlabyo joogto ah oo loo habeeyay si looga hortago kan hadda jira. Dhaqdhaqaaqa ayaa markaa wareejinaya armature dhexe oo ku dheggan garaac tilmaanta. Taleefoonkan waxaa loo dejiyey cabir qalinjabinaya oo u oggolaanaya hawlwadeenka inuu ogaado inta hada socota ee soo martay wareeg xiran. Markaad cabbireyso wareegga wareegga, waxaad u baahan tahay inaad ku xirmaan xargaha hal-maydhka taxanaha ah. Hoos udhaca ammitirku wuxuu macnaheedu yahay inaysan lumin doonin awood badan. Haddii ammeterku ku xiran yahay isbarbar dhig, jidku wuxuu noqon karaa mid gaagaaban oo wareegeeya si ay dhammaan qulqulka hadda u dhex maraan aaladda mitirka halkii bedka.
TCDD, E + M Elektrik - Aykon Electric iskaashi iskaashi iyo Siemens A.Ş. shirkadda ...
Haydarpaşa ayaa sidoo kale sii wadata daaweynta dalxiisayaasha jarmalka ah ee lagu xiray tamarta korontada
Wiilku wuxuu ku dhintay dhimashada korontada
Guuritaanka ammeters-ka korantada